Taariikhda My Butros » Afar nooc oo Ragga Dumarka Tag, waayo,
Last updated: Oct. 14 2020 | 3 min akhri
Furaha Nin qalbigiisa ma aha inuu caloosha iyada oo loo marayo. Waa maskaxdayda. Isticmaalka cilmi nafsiga iyo daawashada aad ku guuleysan karto ninkii riyooyinkiinna aad iyo keeni a hindiga muddo-gaaban ama farxad nolosha oo dhan. Wax kasta oo aad raadinayso markan in aad noloshaada. Helitaanka in la ogaado qofnimadooda iyo waxa iyaga ka dhigaa inay sax waa furaha iyo aad keeni kartaa meel adag qalbigooda. Hoos waxaa ku qoran afar nooc oo Mareynkanka’ shaqsiyad iyo sida aad samayn kartaa oo nin idinkaa iska leh in.
Dude ayaa Cool
Nin ayaa qabow waa nooca nin oo astaan ​​u ah in ay leeyihiin dad badan oo noloshiisa. Waa nooc ka mid ah waxay noqon kartaa sida ay ahayd qof qaba ka ambabaxay ah. Sidaas in natiijo laga yaabaa in aad hoos u keyd in uu dunida oo dhan. Ka-muuqashada waa kuwo muhiim ah in nin ka qabow. Haddii ay tahay isbeddellada ugu danbeeyay ee uu xirto ama uu qaato mawqif ku anti-fashion ah nin u qabow socdaa kalsoonida waqtiyada oo dhan iyo xuduudda karo ka gaareen-kalsooni ku waqtiyada. Nin A qabow jecel yahay inuu noqon xarunta of dareenka iyo ma jeclaan doonaa inaad isaga sidaas kula tartami ha leeyihiin dareenka. Guys Cool sida guys kale qabow iyo gabdhaha iyo ag dadka la qabow sidaa darteed haddii aad leedahay sifooyin nerdy aan isku dayaan in ay muujiyaan in shirkaddu ilaa uu si jacayl kula in uu si fudud ma awoodo in aan aad qabto in uu naftiisa iyo ma dhab ahaantiina way soo bandhigaan hore ee saaxiibbadiis! Cool wiilasha u muuqdaan in ay dhagaystaan ​​oo dheeraad ah si saaxiibadooda halkii ugu sababtoo ah waxay qaataan Qoom kale’ fikrado sida injiilka ka badan kuwa Xukunkooda u gaar ah si aanay u lumin wajiga.
The qarkeedii bloke High
The nin qarkeedii sare waa nooca nin oo had iyo jeer u muuqataa dapper oo u badan tahay in isku joog. Waxa uu u egtahay in ay ka hadlaan waxyaabaha dahsoon ee music, suugaanta, iwm … laakiin marnaba Cedar galay jeclaysiga xubno dheeraad ah oo ku qaniga ah ee wax dahsoon ee beeraha kuwaas. Tani maxaa yeelay waa arrin sax ah ama ugu yaraan taasi waxa weeye waxa ay jecel yihiin in ay u muuqdaan: caqliga iyo sax ah. Sida dude ee qabow
saftay waa mid muhiim u ah ka bloke qarkeedii sare. Waxaa u badan yahay arrin snobbish aad si noocan ah nin. Reality TV iyo wixii la mid ah waa waqti lumis isaga si. Si aad u heshid la dhigtay ninkan oo kale waxaad u baahan doontaa in la cadaydo kor ku saabsan aqoonta dahsoon oo u labistaan ​​arrin casri ah iyo xarrago. Laakiin isku day inaadan si ay u noqdaan snobbish ee geedi socodka. Xusuusnow in aad taariikhda ku karto snob la'aan ahaa snob naftaada. Cunsur kale oo ku tixgeliyo bloke qarkeedii sare waxaa la soo cuneysid. Waxa uu doonaynin in la qabtay dhintay in cafe leh cunto raqiis ah ama MacDonalds. Waxay u badan tahay in uu noqon doono in ka badan cuntada badda ama Muqaaxida bar ah waxaad la kulmi lahaa in isaga la.
The Wiil-xiga-albaabka waa nadiif-cut, nin macaan. Waxa uu jecel yahay inuu cabbo laakiin ka badbadin oo uu u egtahay inay jecel yihiin muusikada aad u caadiga ah, TV, iwm … Qaldan ee ku saabsan wiil-xiga-albaabka waa in uu u macaan yahay, oo dhan iyo iftiin kaas oo laga yaabo in uu Jini. Waxay aad u la yaab laga yaabaa. Waxay u badan tahay waxaa jira kooxda xeel jiraan oo ay kaliya u muujiyaan in aad ee gaarka loo leeyahay. Waxaan rajeynayaa in qol adiga aawadaa;! Laakiin iyaga qudhoodu ha noqon oo ha isku dayin inaad bedesho cidda ay yihiin, laakiin haddii aad dareensan tahay in ay isku qarinayaan ka dambeeya in si nabad ah image oo aan ogolaadaan dhabta ah is in domain sida mararka qaarkood waa kiiska badan oo ka mid ah wiilasha-xiga-albaabka ka dibna si tartiib ah dhiirigali in ay sidaa sameeyaan, iyadoo la tusayo in aad jeclaan dhabta ah ee iyaga iyo in aad Doono. Laakiin aad u adag ha riixin, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in la qabto ay haleelaan si ay u adag tahay in halkaas ha ka mid ah ayaa iskood u soo baxay.
Man The Nerdy
Nerd waxay la mid ah bloke qarkeedii sare ee dareenka og waxyaalo badan oo dahsoon. Si kastaba ha ahaatee nerd waxay u egtahay inay jeclaan waxa ay jecel yihiin sida ka soo horjeeda ka jeelahay wax u show ama si ay u muujiyaan sida ay caqli ay yihiin. Oo marar badan kuwa wax dahsoon ma yihiin dhammaan qaaliga ah oo sax ah. Nerd waa mid aad u dhab ah oo uu saftay ma tahay oo dhan muhiim ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo badan oo nerds ka xubnood ayaa si hippies in Whovians (Doctor Yaa taageerayaasha) iyo taageerayaasha catwalks-fi. Waa dad aad u xiiso badan, laakiin waxaa inta badan ka gudbeen maxaa yeelay, dadka qabaa nerds ayaa aad u doonaya hindiga taas waa fikrad khaldan caadi ah. Nerds waa sida picky sida qof kasta oo kale oo jecel in la helo dabiicaddiinna wanaagsan ee la Wadaage. Waxaa damca in uu daal ah in nerd sababtoo ah inta badan nerds ayaa lagu soo dejiyey ee la soo dhaafay. Qof kasta oo la aaminsan yahay duwan leedahay wax badan oo la dhigay ilaa si loo helo dhibic of trust noqon kartaa wax adag. Sida caadiga ah nerds u muuqdaan in ay taariikhda ku nerds kale maxaa yeelay waa raaxo naftooda iyaga la laakiin haddii aad caddeyn karto in aad tahay maskax furan tani ay horseedi karto xiiso ah, madadaalo, xiriirka u tur iyo qurux.